Kuyini ukujuluka kwakho? - Izimpendulo Ezihamba Phambili
Main > Izimpendulo Ezihamba Phambili > Imibuzo nezimpendulo ezi-sweat
Kuyini ukujuluka kwakho?
Umjulukoyaziwa nangokuthi i-ukujuluka(yithi: pur-spuh-RAY-shun), futhi yenziwa cishe ngokuphelele ngamanzi, ngamanani amancane amanye amakhemikhali afana ne-ammonia (yithi: uh-MOWN-yuh), urea (ithi: yoo-REE-uh), usawoti, noshukela. (I-Amoniya ne-urea kusala ninieyakhoumzimba wephula amaprotheni.)
Umugqa wokugcina ubonakala futhi uzinika umfutho owengeziwe ngejubane. Njengoba imilenze yakho ithatha ijubane, ukuphefumula kwakho kuya kujula, inhliziyo yakho ishaya ngokushesha, futhi umjuluko uthela phezu kwesikhumba sakho. Ngabe le nto ivela ngokungazelelwe futhi iyini ngempela? Inhloso? Kunezimo eziningi ezingasenza sijuluke: ukudla okubabayo, uvalo, nalapho sigula.
Kepha ukuzivocavoca umzimba yikhona okwaziwa kakhulu futhi okuvame kakhulu. Uma lokhu kwenzeka, ukujuluka kwenzeka ekuphenduleni ukunyakaza okubangelwe ngaphakathi kwamaseli akho. Njengoba ukwandisa ijubane lakho, imisipha yakho isebenza kanzima futhi idinga amandla amaningi.
Inqubo ebizwa ngokuthi ukuphefumula kweseli isebenzisa i-glucose ne-oxygen ukwenza i-ATP, imali yamandla eseli. Iningi lale nqubo lenzeka ezakhiweni ezibizwa nge-mitochondria. Lapho uhamba ngokwengeziwe, i-mitochondria isebenza kanzima ukugcina umzimba wakho unamandla.
Kodwa-ke, wonke lo msebenzi unenani lawo. Lapho amaseli ediliza i-ATP, akhipha ukushisa. Ukushisa kuvuselela izinzwa zokushisa emzimbeni wonke.
Ama-T tube receptors abona ukushisa okweqile okukhiqizwa amaseli akho emisipha bese edlulisela lolu lwazi ku-hypothalamus, elawula ukushisa komzimba. I-hypothalamus iphendula ngokuthumela amasiginali ngesistimu yezinzwa ezwelayo kuzindlala zomjuluko esikhunjeni sakho. Lokhu kusatshalaliswa ikakhulukazi emzimbeni ngokugxila okuphezulu ezintendeni zezandla, ematheni ezinyawo nasekhanda.
Lapho indlala yezithukuthuku kuqala ithola isignali, uketshezi oluzungeze amangqamuzana kusisekelo salo oluhlanganisiwe lunenani eliphakeme le-sodium ne-chloride. Amaseli afaka la ma-ion kushubhu elingenalutho elihamba ngendlala yezithukuthuku. Njengoba-ke usawoti oshubhu kunangaphandle, amanzi angena kushubhu nge-osmosis.
Njengoba lokho okubizwa ngokuthi uketshezi oluyinhloko lukhula ezansi kwephubhu, umfutho wamanzi uyisunduza ungene kushubhu yengxenye ende eqondile yesiteshi. Ngaphambi kokuthi ingene esikhunjeni, amaseli afaka ithubhu azophinda athole usawoti omningi ngangokunokwenzeka ukuze inqubo iqhubeke. Izithukuthuku zimunca amandla okushisa omzimba wakho bese zihwamuka ngaphezulu, bese kwehlisa izinga lokushisa kwakho.
Le nqubo, eyaziwa ngokuthi ukupholisa okuhwamukayo, ibiyindlela ebalulekile yokuzivumelanisa nokhokho bethu. Lo mphumela wokupholisa awusizi kuphela ngesikhathi sokuzivocavoca umzimba; siyajuluka nakwezinye izimo eziningi. Ukudla okubabayo ikakhulukazi kungenza abanye abantu bajuluke kakhulu ebusweni babo, ngoba izinongo zibangela impendulo efanayo ye-neuronal ebuchosheni eyenza ama-receptors okushisa avame ukwenzeka Ukujuluka nakho kuyingxenye yempendulo yokulwa noma yokundiza, ekhuthazwa yizimo ezicindezelayo, njengomuntu ophume ngosuku noma kwinhlolokhono yomsebenzi.
Lokhu kwenzeka ngoba i-adrenaline ivuselela ukusebenza kwemisipha futhi ikhulise imithambo yegazi, ukusabela okubili okwandisa ukushisa futhi kubangele ukusabela kokujuluka okwenzeka lapho sigula. Lapho sinomkhuhlane, siyajuluka ngoba izifo zivusa i-hypothalamus yokwandisa ukusebenza kwemisipha, yona ekhipha amandla amaningi kunokushisa. Lokhu kwandisa ukushisa kwakho jikelele, indlela evikelayo eyenza umzimba wakho ungahlali kalula kuma-virus.
Njengokugijima, ukujuluka kusiza umzimba wakho ukuthi ususe lokhu kushisa. Lapho umkhuhlane usuphelile noma uwine umjaho wakho, ama-receptors akho okushisa azozwa ukwehla kokushisa futhi i-hypothalamus izomisa impendulo yakho yokujuluka. Kwezinye izimo, njengasemuva kokugijima, i-hypothalamus ibuye isayinele umzimba wakho ukuthi udinga ukugcwalisa amanzi asecwile, ngakho-ke uma wenza umzamo wokufeza inhloso elandelayo, ungacabanga izithukuthuku njengekhalbhtha yomzimba wakho, ikwenza ukwazi ukuhamba ibanga elingaphezulu.
Lapho ukushisa komzimba wakho kukhuphuka ekuzivocavoca umzimba, ekushiseni, ekucindezelekeni noma ekushintsheni kwama-hormone,ukujulukaisiza ukugcina ukushisa kwakho kwangaphakathi endaweni ekhululekile engu-98.6 degrees Fahrenheit.Ukujulukaisiza ukukhulula ukushisa, okusiza ukugcina izinga lokushisa lomzimba elifanele, kusho uPamela Webert, isazi sokuzivocavoca umzimba kuHenry Ford Health System.
Umjuluko wenzeka kanjani?
Lapho isimo sezulu sishisa noma izinga lokushisa komzimba wakho likhuphuka ngenxa yokuzivocavoca umzimba noma imfiva,ajulukeikhishwa ngamapayipi esikhunjeni sakho. Kuswakama ubuso bomzimba wakho bese kukupholisa njengoba kuhwamuka.Umjulukoyenziwa kakhulu ngamanzi, kepha cishe iphesenti elilodwa le-ajulukekuyinhlanganisela kasawoti namafutha.16. 2020.
Ngabe ukujuluka kukulungele ngempela?
Ngokombono womzimba,ukujulukaimpelakuhleinto. Umzimba wethu ubuzoshisa uma singakwenziajuluke. Kepha eminye yemisebenzi ebangelaukujuluka(isikhathi esiningi lapho kushisa, ukwethuka noma ukugula) kuhlotshaniswa nezinye izinkinga, njengokukhathala kokushisa, ukukhathazeka nokugula.
Ingabe ukujuluka kuyasha?
Ngenkathiukujulukaakunjaloshisa amanoni, inqubo yokupholisa yangaphakathi iwuphawu lokuthi uyievuthayoama-calories. Isizathu esiyinhloko thinaajulukengesikhathi sokuzivocavoca amandla esiwasebenzisayo akhiqiza ukushisa komzimba kwangaphakathi, kusho uNovak. Ngakho-ke uma usebenza kanzima ngokwanele ukuzeajuluke, uwenaevuthayoama-calories ngenqubo.22. 2020.
Kungani umjuluko wami unuka kangaka?
Lokho kungenxa yokuthi uhlobo olulodwa lweajulukeukuthi imizimba yethu ekhiqizayo icebile emafutheni. Amagciwane atholakala ngokwemvelo esikhunjeni sethu adiliza lokhu okunothile okunamafuthaajulukefuthi ikhiqiza uhla lwamaphunga esiwahlanganisa nephunga lomzimba. '19. 2019.
Kungani izithukuthuku zingcolile?
I-Apocrineajulukekukodwa ayinalo iphunga, kepha uma amabhaktheriya ahlala esikhunjeni sethu exubana nezimfihlo ze-apocrine, angaveza iphunga elibi, kusho uHaimovic.6. 2018.
Ingabe ukujuluka kuhle kwesikhumba?
Ukuhamba kwegazi okufanele kuvumela umoya-mpilo nezakhamzimba ukuba kujikeleze futhi kondleisikhumbaamaseli. 'Umjulukoizosiza i-isikhumbakubukeka kumanzi futhi 'kungamazolo,' okungabonakala njengokuthuthukisa ukubukeka kwawo, 'kusho uDkt.
izivivinyo zokumiswa komqeqeshi
Ingabe ukujuluka kukhipha umzimba wakho emzimbeni?
Umjulukoingu-99% wamanzi kuhlanganiswe nenani elincane likasawoti, amaprotheni, ama-carbohydrate kanye ne-urea, kusho udokotela wemithi yomndeni we-UAMS uDkt Charles Smith. Ngakho-ke,ajulukeayakhiwe ngobuthi kusukaumzimba wakho, nenkolelo yokuthiajulukecanhlanzaiumzimbainganekwane. Ngeke ukwaziajulukeubuthi obuphuma ku-umzimba, UDkt.
Ingabe ukujuluka kuyashisa amafutha esiswini?
Ukujulukakukodwa akunjaloukushainani elingalinganiswa lama-calories, kodwaukujulukauketshezi olwanele luzokudalela ukuthiulahlekelweisisindo samanzi. Kungukulahlekelwa kwesikhashana, noma kunjalo. Lapho usuvuselele umzimba ngamanzi okuphuza noma ngokudla, uzobuyisa ngokushesha noma yisiphi isisindo esilahlekile.
What does igama elithi ukujuluka mean in English?
1. Ukusebenza ngokuzikhandla noma ngokuzikhandla. 2. Ukukhathazeka kakhulu. 1. Ukujuluka kakhulu. 2. Ukukhathazeka kakhulu. Umsebenzi onzima: ngilungise igceke ngomjuluko webunzi lami. [AmaNgisi sweten aphakathi, asuka ku-Old English swǣtan; bheka iswidi- ezimpandeni zase-Indo-European.] I-American Heritage Dictionary yolimi lwesiNgisi, uHlelo lwesihlanu.
Yini ukwakheka kwamakhemikhali omjuluko womuntu?
Umjuluko ufana namakhemikhali ne-plasma, kepha izingxenye ezithile zigcinwa noma zikhishwe ngokukhetha. Ukwakhiwa Okujwayelekile Kokuphefumula Umjuluko uqukethe amanzi, amaminerali, i-lactate ne-urea.
Kusho ukuthini ukujuluka?
Okungakahleleki Ukukhathazeka noma ukukhathazeka: Musa ukujuluka ngenxa yezikweletu. 1. a. Ukukhipha (umswakama) endaweni evulekile, njengesikhumba. b. Ukukhipha (imfucuza) ngomjuluko: wajuluka wabulala ubuthi obusegumbini lesitimu. 2. Ukujiya (umswakama) ngamaconsi amancane ebusweni. 3.